Ndị nwoke vs. Womenmụaka Ntanetị Online | Martech Zone
Vmụ nwoke na Womenmụ nwanyị na Ntanetị Online
Wenezdee, Machị 5, 2014 Wenezdee, Machị 5, 2014 Douglas Karr
Onye na-enwe mmasị n'echiche nwoke na nwanyị? M na-eme… M na-eme… ihe ka ọtụtụ n’ihi na ihe niile na-ekwu maka isi awọ, ndị gbara alụkwaghịm gbara abụba na afọ 40 ha nọ na ndụ m. M a ahụkarị dinta mgbe ọ na-abịa shopping Achọrọ m, m ga-esi, M ga-esi n'ebe ahụ. Nnyocha m na-amalitekarị mgbe m meghere igbe ahụ wee chọpụta na azụrụ m ihe m na-achọghị, chọọ, ma ọ bụ ghọta. Adị m otu nna na-azụghị nwanyị nke bi na nwa nwanyị dị afọ 19, bụ Katie, bụ otu n'ime ndị na-azụ ahịa kachasị ịtụnanya m hụtụrụla. Ọ naghị eketa àgwà m, n'ihi ya, m ga-ekwu na ọ bụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Ihe omuma a site na Ikwu ugwo kwupụta ya… nke a bụ isi nchọta isii sitere na nyocha ha banyere usoro ịzụ ahịa nwoke na nwanyị:
Womenmụ nwanyị na-azụ ihe n'ịntanetị karịa ụmụ nwoke
Mụ nwanyị na-achụ nta azụ ahịa
Women na-aga n'ihi ejiri mee na Devid agụghị ndị gbara ihe
Tech maka ụmụ nwoke na akpụkpọ ụkwụ maka ụmụ agbọghọ? Chee echiche ọzọ
Lovemụ nwanyị hụrụ ngwa n'anya
Chọrọ ịkwalite akara gị na nke nwanyị gị? Banye na soshal midia
N'ezie, ihe a niile na-akwado echiche m na ọ bụ ụmụ nwanyị n'ezie na-achị ụwa!
Tags: ndikomịzụ ahịa n'ịntanetịPinterestRedditndị inyom
Ihe Mere Womenmụ nwanyị Ji Bụrụ Ezigbo Ike Na-akpata Social Media